You are here: Home somal KULAN SHALAY KA DHACAY MAANSOOR OO LAGU ANSIXIYAY BILAABISTA DHISMAHA GAROON QAYBO BADAN KA KOOBAN OO CAASIMADDA HARGEYSA LOOGA DHISO
lagu ansixiyay in la bilaabo dhismihiisa,waxaana kulankaasi ka soo qayb galay masuuliyiin aad u miisaan culus oo u guntaday hirgalinta garoonkaasi.
Maayarka Caasimada Hargeysa,Cabdiraxman Maxamuud Caydiid,Sheekh Aadan Maxamuud Xiiray “Aadan Siiro”,Gudida u xilsaaran Garoonkaasi la bilaabayo iyo qaar ka tirsan Golaha deegaaanka Hargeysa ayaa qado shalay la iskugu yimid Hotel Maansoor lagu lafo guray dhaqaajinta Garoonkaasi iyo sidii mudo kooban loogu hirgalin lahaa. Waxa Garoonkaasi loogu magac daray Magaca Qoyskii Bixiyay Garoonkaasi oo la yidhaa Ilma Shulac sida lagu sheegay Warbixin kooban oo ka soo baxday kulankaasi “Garoonka Shulaac”.
Waxa uu garoonkaasi cusubi ka koobnaanayaa,Garoon Kubada Cagta, Garoon Kubada Kolayga, Garoon Tanis iyo Gym iyo wax yaalo kale oo aad u muhiin ah. Taasi oo Caasimada iyo Dalkaba u soo jiidi karta Sumcad dheeraad ah. waxa uu noqonayaa haddii uu hirgalo garoonkii ugu horeeyay ee Hargeysi yeelo ee intaasi oo qaybood yeesha.
Muddo hore ayaa la asdeeyay garoonkaasi in la dhiso balse imika ayay u muuqataa inuu dhaqaaqayo taabo galintiisu.